Cunnada Atkins - Cunnooyinka La Oggol Yahay Oo Aan La oggoleyn | Cuntada Nutri
Cunnada Atkins waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ee cuntooyinka khafiifka ah ee jira oo ka kooban fulinta cunto hooseeya ee karbohidraatka. Kuwa difaacaya cuntadan, waxay xaqiijinayaan in qofka go'aansada inuu raaco qorshahan, uu kari karo miisaanka luminayo cunida dhamaan borotiinka iyo dufanka aad rabto, ilaa iyo inta aad ka fogaaneyso cunnooyinka ay ku badantahay karbohaydraytyadu.
Daraasado badan ayaa muujiyey in cuntooyinka karbohaydraytku ku yar yahay waa kuwo wax ku ool ah marka ay timaado miisaanka oo hoos u dhaca iyo in aysan ka dhalan khatar caafimaad oo weyn.
Cunnada Atkins waxaa abuuray oo soo saaray Dr. Robert C Atkins sanadkii 1972, markii uu go’aansaday inuu soo saaro buug uu ku ballan qaaday miisaanka luminayo ka dib tilmaamo taxane ah iyo natiijooyin kama dambeys ah oo la yaab leh. Laga soo bilaabo xilligaas, waxay ka mid noqotay cuntooyinka ugu caansan adduunka oo dhan ilaa maanta.
Markii hore cunnadan waxaa si xun u dhaleeceeyay mas'uuliyiinta caafimaadka ee waqtigaas, maxaa yeelay waxay si xad dhaaf ah kor ugu qaaday qaadashada dufanka buuxa. Daraasadihii xigay waxay muujiyeen in dufanka cufan uusan haba yaraatee waxyeello u lahayn caafimaadka dadka.
Waxaa la xaqiijiyay in fure u ah guusha miisaanka luminta cuntooyinka kuwaas oo ah hooseeya ee karbohidraatka Sababtoo ah cunista borotiinka badan, qofku wuxuu qanciyaa rabitaankooda in badan wuxuuna ku dhammaadaa cunid badan kalooriya yar kaas oo ka caawiya miisaanka luminta la rabo.
1 4-ta weji ee cuntada Altkins
2 Cuntooyinka laga fogaado cuntada Atkins
3 Cuntooyinka aad si ammaan ah ugu cuni karto cuntada Atkins
4 Cabitaannada cuntada Atkins
5 Cunto caadi ah hal toddobaad oo ku saabsan cuntada Atkins
4-ta weji ee cuntada Altkins
Cunnada caanka ah ee Atkins waxay u qaybsan tahay 4 waji oo kala duwan:
Wajiga soo-dhaweynta: Maalmahan ugu horeeya ee qorshahan cuntada waa inaad ka cuntaa wax ka yar 20 garaam oo karbohaydrayt ah maalintii qiyaastii 2 toddobaad. Waxaad cuni kartaa cuntooyinka hodanka ku ah dufanka, borotiinka, iyo khudradda cagaaran. Marxaladdan ayaad lumineysaa culeys badan.
Wejiga isu dheelitirka: Marxaladdan si tartiib tartiib ah ayaa loogu darayaa noocyada kale ee cuntada si loo nafaqeeyo jirka. Waxaad cuni kartaa lowska, khudradda carb-yar, iyo miro yar oo miro ah.
Wajiga hagaajinta: Marxaladdan qofku wuxuu aad ugu dhow yahay inuu gaaro miisaankaaga habboon sidaa darteed waxaad ku dari kartaa karbohidratka badan cuntadaada oo aad gaabisaa miisaanka oo yaraada.
Wajiga dayactirka: Marxaladan ugu dambeysa qofku wuu cuni karaa kabooraadyada in jirkaagu u baahan yahay adoon miisaanka qaadin.
Dadka qaar ee raaca cunnooyinka noocan ah way ka boodaan wajiga soo-gelitaanka gabi ahaanba dooro inaad ku darto xaddi badan oo miro iyo khudrad ah cuntada. Xulashadaan quudinta ayaa waxtar weyn u leh helitaanka hadafka la doonayo. Taas bedelkeeda, dadka kale waxay doortaan inay ku sii jiraan wajiga soo-gelinta si aan xad lahayn, waxaa caan ku ah cuntada ketogenic ama ay aad ugu hooseyso kaarboohaydraytyada.
Cuntooyinka laga fogaado cuntada Atkins
Waxaa jira dhowr cunno oo ah waa inaad iska ilaalisaa cunista intaad ku jirto cuntada Atkins:
Nooc kasta oo ka mid ah sonkorta kaas oo ay ku jiraan cabitaannada fudud, nacnaca, jalaatada ama cabitaanka miraha.
Wax la cuno badarka sida qamadiga, galley ama bariis.
ka saliidaha khudradda sida dalagyada soodhaha ama galleyda gebi ahaanba waa mamnuuc.
Miraha leh karbohidraat heer sare ah sida mooska, tufaaxa, liinta ama pears.
ka digiraha sida misir, digaag ama digir ayaa sidoo kale laga reebay cuntadan.
Istaraatiijku sidoo kale waa inaan laga fogaan, sidaas baradhada ma cuni doontid iyaga.
Cuntooyinka aad si ammaan ah ugu cuni karto cuntada Atkins
Marka xigta waxaan faahfaahin doonaa cuntooyinka hadaad cuni karto noocan ah cuntada khafiifka ah:
Waa la ogol yahay cun hilibka sida hilibka lo'da, doofaarka, digaaga ama digaaga.
Kalluunka iyo cunnada badda sida salmon, tuna ama sardines.
Cunto nafaqo leh sida ukunta waad ku dari kartaa cunnadan.
Khudaarta cagaaran Iyaga ayaa sidoo kale lagu darayaa si aad uhesho isbinaajka, broccoli ama kale.
Nooc kasta oo ka mid ah nuts sida yicibta, iniinta ama abuurka bocorka si buuxda ayaa loo oggol yahay.
Dufanka caafimaadka leh nooca saliida saytuunka ah oo bikro ah oo siyaado ah.
Cabitaannada cuntada Atkins
Cabitaannada in waa la ogol yahay cuntada Atkins waa sida soo socota:
First of dhan Biyo, taas oo ku habboon in si buuxda loo qoyo loona baabi'iyo sunta.
Qaxwada Waa loo oggol yahay maxaa yeelay waxay hodan ku tahay antioxidants-ka waxayna caafimaad badan u leedahay jirka.
Cabitaan kale oo faa'iido badan u leh caafimaadka iyo in cuntada Atkins ay u oggolaato waa shaah cagaaran.
Taabadalkeed waa inaad iska ilaalisaa cabitaannada ay kujiraan khamriga waxayna ku jiraan karbohaydraytyo badan sida biirka.
Cunto caadi ah hal toddobaad oo ku saabsan cuntada Atkins
Marka xigta iyo si aan u caddeeyo, waxaan ku tusayaa tusaale sida ay noqon doonto quudin toddobaadle ah cuntada Atkins. (Wajiga Induction)
Isniinta: quraacda qaar ukunta iyo khudaartaQadada salad digaag ah oo ay weheliso sacab muggeed oo lows ah iyo cashada steak leh khudaar
Talaado: Ukunta iyo hilib doofaarka quraacda, digaaga iyo khudaarta ka hartay habeenki kahoreeyay iyo habeenki qadada jiisburger iyo khudradda
Arbacada: waqtiga quraacda mid waad cuni kartaa omelette leh khudradda, waqtiga qadada saladh iyo habeenkii hilib la kariyey oo leh khudaar.
Khamiista: Ukunta iyo khudaarta quraacda ah, wixii kasoo haray cashadii xalay ee qadada, iyo cashada salmon leh subag iyo khudrad.
Jimce: quraac hilib doofaar iyo ukumoQadada, salad digaag leh sacab muggeed oo iniin ah iyo kubbado hilib leh khudaar casho.
Sabtida: quraac quraac ah omelet oo leh khudaar, qadada kubbadaha hadhaaga ee haray habeenki kahoreeyay iyo cashada qaar jarjarka doofaarka leh khudaarta.
Axada: Ukunta iyo hilib doofaarka quraacda, hilib doofaarro casho iyo casho baalal digaag la dubay oo leh khudaar.
Waxaan rajeynayaa inaan cadeeyay dhamaan shakiga ku saabsan cuntada Atkins, waa hab caafimaad leh oo wax ku ool ah oo lagu dhimo miisaanka oo lagu gaaro tirada la rabo. Halkan waxaa ah fiidiyow sharraxaya si wax walba looga caddeeyo cuntada Atkins.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Caafimaadka » Cunnada Atkins
Waan ku faraxsanahay guulaha ay i siiyeen ee ku saabsan cuntadan, oo aan qorsheynayo inaan ku dabaqo, maadaama aan culeyskiisu yahay hal mitir iyo lix iyo toban sintimitir oo aan culeyskiisu yahay boqol iyo lix kiilo oo aan xanuun dareemayo. Waxaad cuni kartaa caanaha lo'da.
Jawaab MARIA VILLAVICENCIO OLARTE
maya caano, iskuday inaad iska ilaaliso hilibka doofaarka, inkasta oo aad cuni karto waxay sare u qaadeysaa kolestaroolkaaga, a, waad qaadaneysaa maalin laakiin si joogto ah umaheysid, waad iska caawin kartaa adiga oo qaadanaya casiirka sida crystal light iyo gelatin bilaa sonkor ah iyo carbs la'aan, in aad qaadan karto ilaa 20 garaam oo carbs ah maalintii, sidaa darteed haddii ay wax jiraan 1 ama 2 garaam halkii qaadasho, ha ka fikirin wax badan oo cun, waxaad u baahan doontaa dareenka ah inaad cabayso wax macaan. Ka raadi internetka waxa ay yihiin sonkorta cuntada ee aad qaadan karto iyo xaddiga kaarbooyin ee ay ku leeyihiin qaybta cuntada, waxaan kugula talinayaa inaad iibsato buugga maxaa yeelay halkaas ayuu ku yaal.
caanaha iyo farmaajada ayaa loo oggol yahay cuntada
Jawaab ku bixi MARIA JOSE GONZALEZ SAMPEDRO
darbiyada bullaacadaha wendy dijo
Waad cuni kartaa avokado iyo miraha dhexdiisa qaraha iyo babayga iyo nooca caanaha iyo farmaajada aad cuni karto, mahadsanid
Ku jawaab wendy darbiyada bullaacadaha
Sida loo sameeyo maaskaro nadiifinta oo guriga lagu sameeyo
Miro la cuno si loola dagaallamo dhiig-yaraan